Mpamatsy sy mpanamboatra scarf poly print - Mpanamboatra scarf China Poly Print
Volom-borona kofehy polyester tery
Rehefa mitafy fehiloha, fikolokoloana malefaka sy malefaka amin'ny hoditra ianao dia avelao ianao hahazo aina mandritra ny andro. 100% polyester habe nampidirina: 35 ″ x 35 ″ / 86cm x 86cm, toradroa, haben'ny taila. Fitaovana: 100% Volom-bolo polyester: volavolan-tsaina marani-tsaina sy lamina vita pirinty am-pitandremana (fanontana amin'ny lafiny tokana), endrika kanto sy tsara tarehy mahafinaritra. Fonosana boaty fanomezana. Mety: Bandana toradroa, volom-borona sokajy. Azo ampiasaina mandritra ny taona. Azonao atao ny mitafy hatoka, loha, wais ...
Volom-bolo polyester azo esorina
Volom-bolo polyester malefaka
Saripika fanontana viscose 100%
Tolo-bolo vita amin'ny landy nalaina tahaka